Oedipus sy Electra sarotra, mahasarika ny ankizy amin'ny ray aman-dreniny | Bezzia
Ale jimenez | | Ampianaro ny ankizy
Ny zaza hatramin'ny fahazazany dia nolavin'ny iray tamin'ny ray aman-dreniny kokoa noho ny iray hafa, ary mivoatra amin'ny fomba mitovy hatrany, izany hoe, ny ankizy dia manakaiky kokoa ny reny sy ny zazavavy amin'ny rainy. Izany rehetra izany dia misy fanazavana ara-tsiansa antsoina hoe teoria ny firaisana ara-nofo.
Ity teôria ity dia nofaritan'i Sigmund Freud, izay nilazalaza fa ny fivoaran'ny olona dia avy amin'ny firaisana ara-nofo. Saingy io firaisana ara-nofo io dia tsy nanondro ny foto-kevitry ny faritra momba ny lahy na ny vavy, fa kosa nanodidina ny karazan'olombelona maro hafa.
Ny iray amin'ireo dingana telo ireo dia ilay manazava amin'ny ankapobeny ny teôria momba ny firaisana ara-nofo, ilay antsoina hoe dingana phallic, izay eo anelanelan'ny 3 sy 5 taona, izay ny ankizy dia efa liana amin'ny vatany manokana, mizaha azy io ary mahita ny taovam-pananahana ao aminy. Ho fanampin'izany, dia hahasarika azy ireo ny tsy fitovian'ny firaisana ara-nofo sy ny an'ny hafa.
3 Ahoana no tokony hataon'ny ray aman-dreny manoloana ireo fitambarana ireo?
Ny kompania Oedipus dia manondro ilay be pitsiny fitiavana izay tsapan'ilay zaza amin'ny reniny. Ny zaza mahatsapa faniriana erotika ho an'ny reniny mahita ny rainy ho mpifaninana aminy. Freud dia namaritra ity sarotra ity ho faniriana tsy nahatsiaro tena ho an'ny zaza hanao firaisana ara-nofo amin'ny ray aman-drenin'ny lahy na ny vavy tsy mitovy (reny) ary manafoana ny ray aman-dreny mitovy lahy (ray).
Nomeny ny anarany Oedipus complex avy amin'ny angano grika an'i Oedipus Mpanjaka, izay namono ny rainy ary nanambady ny reniny avy eo.
Ny zaza dia mandray a toetra tia fananana manakana ny ray aman-dreniny tsy hifankatia. Izany dia satria ny zaza dia mitady famantarana sy maodelim-pitondran-tena. Raha vantany vao vita io dingana io dia hiezaka ny hitovy amin'ny mpifaninana aminy ilay zaza, hahafantatra azy ary ho lasa modely amin'ny fiainana.
Amin'ity tranga ity dia ny ny fitiavana dia tsapan'ilay zazavavy amin'ny rainy, mahita ilay reny ho mpifaninana. Ity anarana ity dia notendren'i Carl Gustav Jung hanendry ny mifanitsy amin'ny kompania Oedipus, izay tsy nifanarahan'i Freud firy.
El Electra complex zavatra mahazatra indrindra eo amin'ny zazavavy amin'ny fotoana iray amin'ny fahazazany. Na izany aza, io fitiavana ny zanakavavy io amin'ny rainy dia mety hahatratra bebe kokoa, ka hiteraka fifandrafiana amin'ny reniny. Na eo aza izany dia tsy voamariky ity sehatra ity, satria ny tovovavy dia mifikitra mafy amin'ny reniny, izay manahirana ny mifaninana aminy.
Noho izany, raha toa ka mivaha ara-dalàna ny dingana, ny zazavavy dia handray ny fahareseny, mihevitra fa ny fitiavan'ny rainy dia reniny ary izy dia vonona ny hitady fitiavana amin'ny lehilahy hafa. Na izany aza, raha tsy voavaha io dia mety hitranga ny tsy fetezan'ny pathological.
Ahoana no tokony hataon'ny ray aman-dreny manoloana ireo fitambarana ireo?
Ho an'ny zazalahy sy zazavavy handresy ity dingana ity tsy misy karazana trauma, ny ray aman-dreny no hevi-dehibe fanohanana mba hahitan'izy ireo ny andraikitra ara-nofo mety. Noho izany, ity dingana ity dia tokony horaisina amin'ny fomba tsara, nefa tsy manome lanja izany.
Mila miaina toy ny ianao zavatra vonjimaika, na dia tsy mandratra ny fihetseham-pon'ireo ankizy aza. Mila manampy azy ianao amin'ny fanaovana hetsika isan-karazany amin'ny ankohonanao, ary koa amin'ny ankizy hafa, mba hifaneraserany amin'ny olona hafa ankoatry ny manodidina azy.
Raha ny momba ny ankizy dia hanohy hifikitra amin'ny fitiavan-dreniny izy ireo, saingy ny fialonana amin'ny ray aman-dreniny dia hihena rehefa mahita fialamboly mahazatra miaraka aminy izy ireo, toy ny soccer. Mikasika ny zazavavy, manodidina ny 5 na 6 taona, dia ho tsapany fa tena mitovy amin'ny reniny izy ireo, ka hanomboka hanahaka sy hahafantatra azy izy ireo, ka nanadino an'io fisarihana ny rainy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Oedipus sy Electra sarotra, mahasarika ny ankizy amin'ny ray aman-dreniny
Fikarakarana volo aorian'ny fanitsiana (II)
Gel fantsika amin'ny fitondrana vohoka